एक-अर्कालाई प्रेम गर – EL-Shaddai Family Daily Bread
Home Channels Daily Bread एक-अर्कालाई प्रेम गर
एक-अर्कालाई प्रेम गर
मे ४, साेमबार २०२०
अाजकाे प्रार्थना र प्रशंसाकाे लागि अाधार वचन
एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिन्छु: तिमीहरूले एक-अर्कालाई प्रेम गर; जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु, त्यसरी नै तिमीहरूले पनि एक-अर्कालाई प्रेम गर! यहून्ना १३:३४
येशू पक्रिनु समय भन्दा अगाडि चेलाहरूकाे साथ यी वचन येशूले बाेल्नुभयाे । येशूकाे चेलाहरू हामी जस्तै विभिन्न स्वभाव भएकाे पाँउछाैं । जब पत्र्रुस त्यहाँ थिए, उसले परमेश्वरकाे कुरालाई छिटै बुझेर मानिसकाे चालमा अर्थ लाउथे र ज्यादै प्रश्न साेध्ने गर्थे । यहूदा इस्करयोती जसले परमेश्वरलाई धाेका दिन लागेकाे थिए, उ नि अाफुसँग पैसाकाे थैला बाेकेर चुपचाप बसेकाे छ जुन येशूलाई पक्राउनेकाे खातिर पाएकाे थिए । बाँकी चेलाहरू सबै चुपचाप बसेका छन । येशूले तिमीहरू मध्य कसैले मलाई धाेका दिनेछाै भन्दै यहूदा इस्करयोतीलाई संकेत गर्नुभयाे तर कुनै चेलाले साेधेन कसरी के गरेर यहूदा इस्करयोतीले तपाईलाई धाेका दिन्छ भनेर बुझन चाहेन । चेलाहरूले याे सम्झे यहूदा इस्करयोतीसँग पैसा ल्याएकाे रहेछ । प्रभुले त्याे पैसालाई अाउने भाेजकाे तयारी गर्नु भनेर यहूदा इस्करयोती लाई चाँडै गर्नु भनेकाे हाेला भनेर सबैले साेचे । तब राेटि लिएर यहूदा इस्करयोती बाहिर निस्कन्छ ।
अरूलाई अाफुसरह प्रेम गर् भन्ने वचन सुन्द कति सरल लाग्छ तर जब हामी व्यवहारमा प्रयास गर्छाै, धेरैले हार मान्छ। येशूले भन्नुभयाे एकअर्काेलाई प्रेम गर् । हामी भन्छाै, जसलाई प्रेम गर्नुपर्ने हाे हामीले प्रेम गरेका छाैं प्रभु । तर येशूले भन्नुभएकाे प्रेम बेग्लै थियाे; त्याे चाहिँ निस्वार्थ, विना स्वार्थ, वलिदान सहितकाे, सिद्ध , साचाे प्रेम थियाे जाे कसैले गर्न सक्दैन । येशूलाई थाहा थियाे यूहदाले फरिसिबाट मलाई पक्रीनु भनेर पैसा लिएकाे छ र अब के हुन्छ भनेर नि थाहा थियाे । येशूले येहूदा इस्करयोतीलाई त्यसाे नगर्नु भनेर गाली नि गर्नुभएन तर येशूले यसाे भन्नुभयाे ´तिमीले जे गर्नु लागेकाे कुरा छिटाे गर् ।` महिमामा उठाईन लागेकाे परमेश्वरकाे पुत्र भईकन येशूले सबै चेलाहरूकाे खुट्टा धुईदिनु भयाे अनि यहूदाकाे समेत धुईदिनु ; यदि तपाईं – हामी भएकाे भए, यसाे गर्न सक्ने थिएनाैं । यदि गरे पनि चिसाेपन भएर गर्थाै हाेला। यसबाट येशूले बुझाउन चाहान्नुहुदैछ, तिमीहरूले अाफनाे शत्रुको नि सेवा गर्नुपर्नेछ, यस्ताे गर्नलाई पछि नपर मैले सिकाएकाे छु । येशूकाे प्रेम विना स्वार्थ, वलिदान सहितकाे, सिद्ध , साचाे छ। येशूले सबै बिरामी मानिसलाई, पापी मानिसलाई, त्यागिएकाे मानिसलाई र अन्यजातिलाई नि प्रेम देखाउनुभयाे । येशूले याे सब पिता परमेश्वरकाे ईच्छा पूरा गर्नु थियाे । हामशि प्रति प्रेम गर्नुभएकाेले परमेश्वर पिताले याे संसार नाशा गर्नुभएन जति नै धेरै तपाईंकाे मेराे पाप भए पनि । उहाँले तपाईलाई लुट झै याे सदाेम गाेमारा संसारबाट छुट्टैाएर बचाँउन चाहान्नुहुन्छ। जसरी अब्राहामले परमेश्वरलाई विन्ती गरे, र परमेश्वरले स्वर्गदुत लुटकहाँ साेदाममा पठाउनु भयाे जहाँ लुटलाई विनाशबाट बचाउनु थियाे । यसरी नै अाज हाम्राे बिचमा येशू ख्रीष्ट संसारमा अाउनुभयाे र हाम्राे पाप निम्ति प्राण दिनुभयाे ताकि हामीले जीवन पाउनसकाैं । येशू ख्रीष्टले परमेश्वर पितासँग हाम्रा निम्ति पवित्र अात्मा पठाईदिनु भनी विन्ती गर्नुभयाे, जब हामी विश्वास साथ पवित्र अात्मालाई गह्रण गर्देछाैं । हाम्राे विश्वासकाे अाधारमा उहाँले हाम्राे राेगमा चंगाई , पापकाे क्षमा, शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नसक्नेछाै र अन्धकारकाे शक्तिमाथि विजय बन्न सक्नेछाै। तर हामीले उहाले भन्नुभएकाे वचनहरू पालन गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ र उहाँलाई खुसी बनाँउन जरुरी छ । यसकारण अब हामीले हारेकाे जीवन जिउनुपर्दैन ।
अन्त्यमा, अाजकाे प्रार्थनाकाे विषय हाे, प्रभु तपाई जस्तै हाम्राे माझमा भएकाे यहूदा जस्ताे मान्छेलाई प्रेम गर्नसकाैं । प्रभु तपाईकाे प्रेम कति महान, अगम्य, निस्वार्थ छ । प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ । संसारमा तपाईं जस्ताे र तपाईकाे जस्ताे प्रेम काँही पाईन्दैन ।
धन्यवाद , अामेन
Previous articleJohn 13:34 Love one another
Next articleज्ञान बढाँउनले कष्ट नि बढाँउछ . उपदेशक १ :१८
Spiritual Poem May 19, 2020
Daily Bread May 16, 2020
Bible Study Mobile Apps March 20, 2021